mann ki baat | ESD | Burmese
စိတ်နှလုံးမှပြောသော စကားများ (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ)...
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသား အပေါင်းတို့ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ… ဒီလို ကိုရိုနာကပ်ဘေး ဆိုက်ရောက်နေချိန်မျိုးမှာတော့ တကမ္ဘာလုံးမှာ အသွင်ပြောင်းလဲမှု ပုံစံအဆင့် အမျိုးမျိုးကို ဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ တယေ...
စိတ်နှလုံးမှ ပြောသောစကားများ (ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)...
လေးစားအပ်ပါသော နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ….. လက်ရှိကာလဟာ ပွဲတော်တွေကို နေရာဒေသ အသီးသီးတို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေကြပြီး ပွဲလမ်းသဘင် ပေါများတဲ့ပွဲတော်ရာသီကာလ ဖြစ်ပါ့တယ်။ ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေအတွ...
စိတ်နှလုံးမှ ပြောသောစကားများ (အပိုင်း – ၁၄) ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင...
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသား အပေါင်းတို့…. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ…. ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်နေ့ဟာ Kargil စစ်ပွဲရဲ့ အောင်ပွဲနေ့ဖြစ်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁ နှစ်အကြာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တပ်မတော်ဟာ Karg...
စိတ်နှလုံးမှပြောသော စကားများ (အပိုင်း – ၁၃)...
လေးစားအပ်ပါသော နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ မင်္ဂလာပါ… ယခုဆိုရင်တော့ စိတ်နှလုံးမှပြောသော စကားများအစီအစဉ်ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် လမ်းခရီးမှာ ထက်ဝက်ခရီးကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့...
စိတ်နှလုံးမှ ပြောသောစကားများ (၃၁-၀၅-၂၀၂၀)...
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးမှပြောသော စကားများအစီအစဉ်ဟာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်ပြောပြစဉ်က...
စိတ်နှလုံးမှ ပြောသော စကားများ (၂၆-၀၄-၂၀၂၀)...
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော နိုင်ငံသားအပေါင်း မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ သင်တို့အားလုံးဟာ လက်ရှိလော့ဒေါင်းချထားတဲ့ကာလအတွင်း ဒီ “စိတ်နှလုံးမှပြောသော စကားများ” ကဏ္ဍဘက်ကို လှည့်လာကြပါတယ်။ ဒီအပိုင်းအတွက် အကြံပြုချက်တွေနှ...
စိတ်နှလုံးမှ ပြောသော စကားများ (၂၉-၀၃-၂၀၂၀)...
ကျနော်ဟာ ဒီလို အထွေထွေ ပြောကြားလေ့ရှိတဲ့ စိတ်နှလုံးမှပြောသောစကားများကဏ္ဍမှာ နယ်ပယ်အသီးသီးတို့ကို ပြောကြားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့တော့ နိုင်ငံအတွင်းနှင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှာ အားလုံးရဲ့ စိတ်သန္တာန်အ...
စိတ်နှလုံးမှ ပြောသော စကားများ (အပိုင်း-၉)...
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့….. ကျနော့်အနေနှင့် နိုင်ငံတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ Kutch ဒေသကနေ Kohima မြို့အထိ၊ Kashmir ဒေသကနေ Kanyakumari မြို့တို့အထိ အနယ်နယ်အရပ်အရပ်တို့မှ နိုင်ငံသားတွေနှင့် ထပ်မံတွေ့ဆု...
စိတ်နှလုံးမှ ပြောသော စကားများ (အပိုင်း ၈)...
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက် ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသား အပေါင်းတို့ သမ္မတနိုင်ငံတော်နေ့ အခါသမယအတွက် နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ကို လှိုက်လှဲစွာ နှုတ်ခွန်းပဏာ ဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ စိတ်နှလုံးမှ ပြောသောစကားမျာ...
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကို နှုတ်ဆက်ကြရတော့မယ့် အချိန်ကာလကို ရောက်ရှိလာတာနှင့်အတူ မိမိတို့ဟာ နှစ်သစ် ၁ နှစ်နှင့် ၂၁ ရာစုရဲ့ တတိယမြောက် ဆယ်စုနှစ်သစ် ၁ ခုအတွင်းကို...